August 27, 2021 - खबरदार न्युज
Aug272021 by AdministerNo Comments
Posted in Breaking News, मनोरञ्जन
काठमाडौ, चर्चित हास्य टेलि शृङ्खला सक्किगोनी नेपालको नं. एक कमेडी सिरियल हो भन्दा फरक नपर्ला। पाँडे, जिग्री, बले, कक्रोच, खुपिका बाउ, काकु, एदुमे, रक्षा, मुन्नी, सिते बा, जयन्ते, रामभजन, जस्ता सक्किगोनिका पात्रहरुले गर्दा सक्किगोनी यो स्थानमा पुगेको हो। यसैबीच पछिल्लो केही साता यता शृङ्खला का मुख्य पात्र अर्जुन घिमिरे पाँडेको अनुपस्थित देखिएको छ। पाँडे पात्र नहुदा सिरियल खल्लो भएको भन्दै पाँडेलाइ पनि सिरियलमा ल्याउनुपर्ने दर्शकहरुको माग छ। युटुबमा आएको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने अधिकांस प्रतिक्रिया पाँडेको नामामा हुन्छन। आखिर पाँडे किन सिरियलमा देखिएका छैनन त? के पाँडेले सक्किगोनी छोडेका हुन त? यी तमाम प्रश्न उठिरहेका छन। खासमा अर्जुन घिमिरे अहिले आफ्नो व्याक्तिगत कामामा व्यस्त भएको कारण उनी सिरियलमा देखिन नपाएका हुन। मिडिया हब संगको बिबाद पछि पाँडे जिग्री मिलेर आफ्नै क्रीयसनमा
बिस्नु माझिले पहिलो पटक मुख खोलिन – श्रीमानले बन्धक बनाएको बिषयमा यस्तो खुलाशा !
Posted in Breaking News, समाचार
विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको यो लोकदोहोरी गीत अहिले नेपाली संगीतप्रेमीको जिब्रोमै झुण्डिएको छ । यूट्युवमा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्युज पाएको लोकदोहारी हो यो । गीतले डेढ करोड भ्युज कटाएपछि केही दिनअघि ‘सेलिब्रेसन’ कार्यक्रम गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गीतसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष गाँसिएका सबै उपस्थित थिए, सिवाय गायिका विष्णु माझी । कार्यक्रम आयोजकले विशेष कारणले विष्णु कार्यक्रममा आउन नसकेको स्पष्टीकरण दिए, उनको अनुपस्थिति अपेक्षित नै थियो । झण्डै डेढ दशकदेखि लोक गायनमा सक्रिय यी प्रख्यात गायिका आजसम्म एकपटक पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छैनन् । विष्णुलाई आफ्नै श्रीमानले बन्धक बनाएर राखेका छन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको लामो समय भयो । यो चर्चा सत्यसँग नजिक छ वा छैन भन्नेचाहिँ आजसम्म रहस्यमै छ । गुमनाम जीवन अहिले एक–दुईवटा गीत हिट हुनासाथ गायक–गायिकाहरुलाई स
दुबै मृगौला फेल भएकी श्रीमतिको नाममा पैशा उठाइ अर्को बिहे गरि श्रीमान फरार – श्रीमतीको बिचल्ली !
काठमाडौ, सुनसरि जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मंगलबारे भन्ने ठाउँ जहाँ एकजना महिलाको पेट एकदमै ठूलो ढंगमा सुन्निएको छ र उहाको दुबै मृगौला समेत फेल छन् । उहाको नाममा चन्दा संकलन गरियो र लगभक १५ लाख पैसा उठ्यो तर त्यो सबै पैसा अरुले नै खाइदियो ।आश्चर्य त यो छकि खाने व्यक्ति अरु कोहि पनि हैन उहाकै आफ्नै श्रीमानले सम्पुर्ण उठाएको पैसा र कान्छि श्रीमती ल्याएर यतिबेला फरार सम्पर्कबिहिन भएका छन् । मान्छेको मनमा यति ठूलो पाप कसरी हुन सक्छ कसरी यत्रो पाप गर्न सक्छ ? आफ्नै श्रीमतीसग यतिका बर्षसम्म सगै बस्दै गर्दा जिन्दगीमा आएका दुख सुखका पाटाहरु सगसगै जिउने र म र्ने भन्ने बाचा कसम खाएका थिए होलान् । एकै रथमा दुई पाङ्ग्रा भएर नै बाचौला भन्ने बाचा खाएका थिए होलान् तर दुर्भाग्य यस्तो भैदियो कि जब तिनै श्रीमती बिराम परेर थला परिन अनि श्रीमानलाई भने अर्को अवसर आए जस्तो भयो ,कठै ।
मुग्लिन-नारायणघाट सडक खण्ड बन्द, यात्रुले गाडिमै रात विताउनुपर्ने बाध्यता ।
काठमाण्डाै - लगातारको झरीका कारण पहिरो जाँदा मुग्लिन-नारायणघाट सडक खण्ड बन्द भएको छ । गएराति ८ बजे सेती दोभानमा ठूलो पहिरो खसेकाले दुुईतर्फी बाटो नै बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार पहिरो पन्छाउन समय लाग्ने छ । लगातार झरी परिरहेको र पहिरो खस्ने क्रम पनि नरोकिएकाले एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न समेत समस्या भएको छ । केहीबेर पछि पहिरो पन्छाउने काम सुरु हुने प्रहरीले जनाएको छ । सडक बन्द भए पछि यात्रुुले गाडीमै रात बिताएका छन् । अहिले यो सडक खण्डमा गाडीको लामो लाइन छ । मुग्लिन-नारायणघाट सडक खण्डको ठाउँ-ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेकाले जोखिम मोलेरै यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छ । पहिरो रोक्ने प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। यो सडक खण्डमा बर्खामा मात्रै नभएर हिउँदमा समेत पहिरो जाने गरेको छ ।
यस्तो छ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय, मासिक भाडा ३ लाख २५ हजार (21)
नेपाली बजारमा रियलमीका चार वटा मोवाइल सार्वजनिक, मूल्य र विशेषता के छन् ? (19)
टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो संविधान दिवस (फोटो फिचर) (18)
एमसीसीबारे काँग्रेस-एमाले नेताका यस्ता तर्क (18)